Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao havaozina » Avy aiza ny 90 isan-jaton'ny fandripahana ala maneran-tany
Vaovao Mafana • Vaovao havaozina
Ny fambolena dia mijanona ho fototry ny fandripahana ala any amin'ny faritra rehetra afa-tsy any Eoropa, izay misy fiantraikany ambony kokoa ny fampandrosoana ny tanàna sy ny fotodrafitrasa, hoy ny fanadihadiana. Ny fiovam-pambolena dia manjaka amin'ny fahaverezan'ny ala any Afrika sy Azia, ary maherin'ny 75 isan-jaton'ny velaran'ny ala very no lasa tany fambolena. Any Amerika Atsimo, efa ho telo ampahefatry ny fandripahana ala dia vokatry ny fiandrasana biby fiompy.
Ny fanitarana ny fambolena dia mitarika efa ho 90 isan-jaton'ny fandripahana ala eran-tany - fiantraikany lehibe lavitra noho ny noheverina teo aloha, hoy ny Fikambanana Momba ny Sakafo sy ny Fambolena an'ny Firenena Mikambana (FAO) raha namoaka ny fikarohana voalohany tamin'ny Fanadihadiana Global Remote Sensing vaovao nataony androany.
Ny fandripahana ala dia ny famadihana ny ala ho fampiasana tany hafa, toy ny fambolena sy ny fotodrafitrasa. Maneran-tany, maherin'ny antsasaky ny fahaverezan'ny ala dia vokatry ny fiovan'ny ala ho tany fambolena, fa ny fiompiana biby fiompy no tompon'andraikitra amin'ny 40 isan-jaton'ny fahaverezan'ny ala, araka ny fanadihadiana vaovao.
Ny angon-drakitra vaovao ihany koa dia manamafy ny fihenan'ny fandripahana ala maneran-tany ary mampitandrina fa ny ala tropikaly, indrindra indrindra, dia iharan'ny tsindry mafy avy amin'ny fanitarana ny fambolena.
"Araka ny fanombanana farany momba ny harena an-kibon'ny tany maneran-tany nataon'ny FAO dia very ala 420 tapitrisa hektara izahay nanomboka tamin'ny 1990," hoy ny tale jeneralin'ny FAO, QU Dongyu, tamin'ny lahateny nomanina ho an'ny fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny fiovan'ny toetr'andro (COP26) avo lenta. fifanakalozan-kevitra mitondra ny lohateny hoe “Hetsika Fanatsarana ny Fandripahana Ala” izay nanehoan’ny FAO ny zava-baovao. Ho an'izany dia nohamafisiny fa ny fampitomboana ny vokatra ara-tsakafo ho an'ny fitakiana vaovaon'ny fitomboan'ny mponina sy ny fampiatoana ny fandripahana ala dia tsy tanjona iraisana.
Ny fampidinana ny onjan'ny fandripahana ala sy ny fampisondrotana ny fandrosoana efa resy amin'ity lafiny ity dia tena zava-dehibe mba hamerenana tsara kokoa sy maitso kokoa amin'ny areti-mifindra COVID-19, hoy i Qu.
Mba hahombiazana amin’izany ezaka izany dia mila mahafantatra ny toerana sy ny antony mahatonga ny fandripahana ala sy ny fandripahana ala ary ny toerana ilana ny hetsika, hoy ny tale jeneraly, ary nanamarika fa tsy azo atao ny manambatra ny fanavaozana ara-teknolojia farany indrindra miaraka amin’ny fahaiza-manao eo an-toerana. . Ny fanadihadiana vaovao dia ohatra tsara amin'ny fomba fiasa toy izany.
Ny fampitomboana ny vokatra azo avy amin'ny sakafo ara-pambolena mba hamaliana ny fitakiana vaovaon'ny fitomboan'ny mponina sy ny fampiatoana ny fandripahana ala dia tsy tanjona iraisana. Firenena an-dalam-pandrosoana 20 mahery no efa nampiseho fa azo atao izany. Eny tokoa, ny angona farany dia manamafy fa ny fandripahana ala dia nihena soa aman-tsara tany Amerika Atsimo sy Azia
Tandindomin-doza ny ala tropikaly
Araka ny angon-drakitra vaovao, tamin'ny taona 2000-2018, ny ankamaroan'ny fandripahana ala dia nitranga tany amin'ny biome tropikaly. Na dia eo aza ny fihenan'ny fandripahana ala any Amerika Atsimo sy Azia, ny ala tropikaly any amin'ireo faritra ireo dia manohy mirakitra ny tahan'ny fandripahana ala avo indrindra.
Tsy mitovy amin'ny faritra maneran-tany ny fandripahana ala
Ny fanadihadiana notarihan'ny FAO dia natao tamin'ny fampiasana angona zanabolana sy fitaovana novolavolaina niaraka tamin'ny NASA sy Google, ary niara-niasa akaiky tamin'ireo manampahaizana nasionaly maherin'ny 800 avy amin'ny firenena efa ho 130.
Ny Dinika avo lenta dia nampivondrona ireo lehiben'ny fikambanana mpiara-miasa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ala mba hanamafisana ny hetsika momba ny toetrandro mifototra amin'ny ala eo ambany fitarihan'ny Sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana momba ny famadihana ny ala amin'ny fandripahana ala. Ny hetsika ihany koa dia ho fandraisana anjara lehibe amin'ny Fihaonambe Stockholm+50, ny fivoriana faha-17 an'ny Firenena Mikambana Forum momba ny ala (UNFF17) ary ny fandinihana lalina ny SDG15 (Fiainana an-tanety) nataon'ny High-level Political Forum on Sustainable. Fampandrosoana (HLPF) amin'ny 2022.
Ny asan'ny FAO amin'ny fampiatoana ny fandripahana ala
Raha jerena ny fifandraisana maro eo amin'ny ala, ny fambolena ary ny fanjarian-tsakafo, ny rafitra stratejika vaovaon'ny FAO dia hitarika ny ezaka hanovana ny rafi-pambolena ara-tsakafo ho mahomby kokoa, tafiditra ao anatin'izany, maharitra ary maharitra.
Miaraka amin'ny Fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana (PNUD) sy ny Fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny Tontolo Iainana (UNEP), ny FAO dia manohana firenena maherin'ny 60 amin'ny fampiharana ny paikady hampihenana ny entona entona avy amin'ny fandripahana ala sy ny fahasimban'ny ala amin'ny alàlan'ny UN-REDD.
Ny FAO koa dia miara-mitarika ny Decade on Ecosystem Restoration miaraka amin'ny UNEP, fotoana iray manan-danja hanafaingana ny hevi-baovao ho amin'ny hetsika fatra-paniry laza.
Ankoatr'izay, ny Fihaonamben'ny UN Food Systems vao haingana dia nanangana fiaraha-miasa teo amin'ireo firenena mpamokatra sy mpanjifa, orinasa ary fikambanana iraisam-pirenena mba hampitsaharana ny fandripahana ala sy ny voka-dratsin'ny tontolo iainana vokatry ny fanovana ny tany ho vokatra fambolena.
Ny Fiaraha-miasa amin'ny ala, tarihin'ny FAO, mampivondrona fikambanana iraisam-pirenena 15, dia mamolavola fiaraha-mientana amin'ny fampihodinana ny fandripahana ala mba hanafaingana ny hetsika sy hampitombo ny fiantraikany.